Raha heverinao fa nivonto fotsiny ny toerana misy ity trano ity ao amin'ny G-11, dia mamporisika anao izahay hisoratra anarana ho azy haingana. Mitady trano misy tanjona maro? Ajanony ny fikarohana bebe kokoa, satria io G-11 io dia mbola manana ny tsara indrindra. Ity trano 5 Marla ity no fananana trano tsara indrindra azonao vidina amin'izao fotoana izao. Ity dia mety ho trano fanofana tianao hiantsoana trano. Zahao ny atolotray ny trano tsara indrindra mety hanome fahafaham-po ny filanao. Matokia anay raha lazainay fa ity fananana amin'ny vola 26000 ity no fampiasam-bola tsara indrindra tadiavinao! Azonao atao ny miantso anay hatrany.
M. Zia Ul Rasool Butt